अवसर खोज्दै बहिरा - Pradesh Today
Homeफिचरअवसर खोज्दै बहिरा
अवसर खोज्दै बहिरा
तुलसीपुर, ३ कार्तिक । बहिरा व्यक्तिहरूले अवसरको खाँचो भएको बताएका छन् । समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारले अवहेलना गर्ने तर अवसर नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । बोल्न र सुन्न नसक्ने भएकै कारण समाजले आफूहरूलाई कुण्ठित पारेर राख्दै आएको भन्दै उनीहरूले आफुहरूको ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारले प्रदान गरेका अधिकारहरू पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै उनीहरूले बहिरा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । शनिबार तुलसीपुरमा भएको राप्ती बहिरा संघको २०औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । दोभासे र सञ्चारको अभावका कारण विभिन्न समस्या झेल्दै आएका बहिरा व्यक्तिहरू आफूहरूप्रति समाजले हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरूरी रहेको बताउँछन् ।
संघ र स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सीप, क्षमतालाई पहिचान गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्ने बहिरा कमल विकले बताए । बोल्न र सुन्न नसक्दा परिवारबाटै अपहेलित बन्नुपरेको पीडा सुनाए । ‘हामी पनि अन्य व्यक्तिजस्तै काम गरेर खान सक्ने क्षमता राख्दछौँ’ उनले भने– ‘बोल्न र सुन्न नसक्दैमा मागेर खानै पर्छ भन्ने हुँदैन हामीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ ।’
समाजले लाटो भनेर बोलाउँदा आफूहरूमा हिनताबोध हुने भन्दै उनले अपाङ्गता भएकाहरूलाई समाजले हेला नभई उत्प्रेरणा र हौसला दिन सक्नुपर्ने बताए ।
बहिरा व्यक्ति मनिष केसीले संविधानले उल्लेख गरे अनुसारका हक अधिकारहरू सुनिश्चित ढङ्गले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले नै आफूहरूका समस्यालाई बुझ्न नसक्दा आफूहरूका हक, अधिकार र अवसरहरू अन्यौलमा पर्दै गएको मनिषले बताए ।
कुनै ठाउँमा गएर काम गर्दा बोल्न नसक्ने भन्दै श्रम शोषण गर्नेहरूसमेत यही समाजमा रहेको उनले बताए । ‘हामी बोल्न सक्दैनौँ भन्दैमा सबै ठाउँ हामीलाई किन हेला गरिन्छ ? उनले भने ‘न त श्रम अनुसारको ज्याला दिईन्छ, न त सम्मान, आखिर हामीलाई किन यस्तो व्यवहार ?’
आफूहरूको क्षमता र सीपलाई सम्मान गर्दै स्थानीय सरकारले विभिन्न अवसहरू दिनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै चासो दिन नसकेको बहिरा तथा अन्य अपाङ्ग व्यक्तिहरूको गुनासो छ । सामाजिक विकासका लागि सर्वप्रथम आफूहरूलाई हेरिने समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन अत्यावश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री युवराज ज्ञवालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समाज निर्माणमा दिएको साथ र सहयोगको समेत कदर गर्न सबैलाई अनुरोध गरे ।
राष्ट्रिय बहिरा संघका पूर्वअध्यक्ष डा. बिरेनराज पोख्रेलले सर्वप्रथम समाजले अपाङ्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरूरी रहेको बताए । दोभासे र सञ्चारको अभावका कारण देशभरका तीन लाख बहिरा व्यक्तिमध्ये २० हजार व्यक्तिले मात्रै सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्दै जानकारी दिँदै उनले सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरकी उपप्रमुख माया शर्माले अपाङ्गहरूको समस्यालाई विशेष प्राथमिकता राख्दै दोभासे र सञ्चारको व्यवस्थापन गरिने बताईन् । नगरलाई अपाङ्गमैत्री नगर बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरी प्रत्यक्ष रूपमै उनीहरूका समस्या पहिचान गरी समाधान गरिने बताईन । संस्थाका अध्यक्ष अजयकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यक्रम संयोजक देवा डाँगीले गरेकी थिइन् ।